Maxamud Dayib oo Warbaahinta Sweden U Waramay - Xogtashacabka.com
Search...	Home About us Contact us Maxamud Dayib oo Warbaahinta Sweden U Waramay
Published on Friday, 02 August 2013 23:44	Xogta Shacabka (Gothenburg) Maxamud Dayib oo la sheegay in dhawaan dhibaato loogu gaystay magaalada Jigjiga, ayaa u xog waramay saxaafada wadanka Sweden isagoo sheegay in ay jid-dil u gaysteen ciidanka Liyuu Booliska ee Kililka 5aad. Maxamud Dayib oo xubin ka ah mid kamid ah axsaabta siyaasadeed ee wadanka Sweden ayaa warbaahinta uga waramay dhibaato uu sheegay inay ka soo gaadhay Jigjiga horaantii bisha July.
Mr. Dayib oo ay wajigiisa cadho ka muuqatay marka uu saxaafada la hadlayay, ayaa si gaar ah jidh-dilka loo gaystay ugu eedeeyay Madaxweynaha DDS Cabdi Maxamud Cumar isagoo ku tilmaamay Cabdi Iley inuu xidhiidh la leeyahay ururada nabadiidka ah ee dagaanka ka dhaq-dhaqaaqa.
Sida hada ka horba aan soo qornay, Maxamud Dayib waxaa u gacan qaaday dad ay isku hayb yihiin oo waliba Abasguul isla yihiin, kuwaasoo u haystay arrimo beesha Abasguul dhexdeeda ah. Sidoo kale ayuu dagaanka Madaxweyne ku sime ka sii ahaa C/llaahi-Ethiopia oo ay Maxamud Dayib isku beel yihiin, dadka qaarna aaminsanyihiin inu qayb ka ahaa khilaafka Abasguul dhexdeeda ah ee gacan ka hadalka sababay.
Hadalka Maxamud Dayib ee u Hogaanka N/Galyada C/laahi-Ethiopia eeda ka leexinayo ayaa u muuqda “Aaboy ka yar iga celiyoo ka wayn igu sii daa” , isagoo dhanka kalena u muuqday inu si gaar ah u dacwaynayo Cabdi Iley.
Halkan Ka Daawo Hadalka Maxamud Dayib